नयाँ संविधानमा पशु अधिकार - पेट केयर - नारी
नयाँ संविधानमा पशु अधिकार
महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘कुनै पनि देश कति महान् छ हेर्नलाई त्यहाँ मानिसले पशुहरूप्रति गरेको व्यवहार हेनुपर्छ ।’ सबै जातजाति, भाषाभाषी एवं लिंगका मानिस आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न संघर्षरत भैरहेका बेला नारा–जुलुस गरेर आफ्नो माग राख्न नसक्ने विचरा पशुतर्फ सम्भवत: कसैको ध्यान गएको छैन । भन्नलाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि ६ सय १ सभासदमध्ये कति कृषि विशेषज्ञ र पशुविशेषज्ञ छन् ? के संविधान बनाउँदा पशु विज्ञहरूको आवश्यकता पर्दैन ? पशुजन्य वस्तुको उपभोग गर्ने चाहनाले एकातिर प्राकृतिक स्रोतमाथि अत्यधिक शोषण भैरहेको छ भने अर्कातिर जीवहरूको निर्भीकतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।
विवेकशील प्राणी भएका नाताले सृष्टिको संरक्षण गर्नु मानव कर्तव्य हो । पृथ्वी सबैको साझा हो । यसमा बास गर्ने सबै जीवलाई विद्यमान स्रोत समान रूपमा उपभोग गर्ने एवं निर्भर्ीकतापूर्वक प्राकृतिक जीवनयापन गर्ने अधिकार छ । आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पशुपन्छी मानवका लागि धेरै महत्वपूर्ण छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विश्वका कुनै पनि जीवजन्तुको अस्तित्व संकटमा परे मानव जीवन पनि संकटमा पर्छ । जीवजन्तु एक–अर्काप्रति निर्भर हुन्छन् । अझ पशुपन्छीको त मानवमाथि यति धेरै अनुकम्पा छ कि गास, बास, कपास तथा जीवनमा आइपर्ने आवश्यकताका अधिकतम चीज तिनैले पूरा गरेको देखिन्छ ।
पशुपन्छीमाथि गरिने निर्दयता केलाई भन्ने प्रश्न व्यक्ति, समाज र राष्ट्रपिच्छे फरक हुन सक्छ । समष्टिमा भन्नुपर्दा मानिसका जुनजुन क्रियाका कारण पशुपन्छीले दु:ख–पीडा बेहोर्नुपर्छ त्यही निर्दयता हो । संविधानमा पशुपन्छीको अधिकार सुरक्षित गर्न हाम्रो समाजमा हुने निर्दयतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ किनभने पशुका सन्दर्भमा हाम्रो समाज त्यति संवेदनशील हुन सकेको छैन ।
–एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदा राँगा–भैंसीलाई ज्यादै कष्टपूर्ण तरिकाले ट्रकमा राखिन्छ ।
–मासुको उत्पादन बढाउन जनावरमा विभिन्न किसिमका हार्मोन प्रयोग गरिन्छ ।
–सौन्दर्य प्रसाधन कम्पनीले ल्याव टेस्टका नाममा पशुमाथि हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्छन् ।
पश्चिमी मुलुकमा पशुहरूप्रति दुव्र्यवहार गरे मानिसलाई कडा सजाय दिइन्छ । पशु कल्याणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू दिनरात काम गरिरहेका हुन्छन् । पश्चिमी मुलुकमा त आफूले पालेको पशुमाथि दुव्र्यवहार गरेको पाइए जेल सजाय हुने प्रावधान छ । हामीकहाँ भने सरकारी नीति–नियम कडा नभएकाले नै छाडा पशु एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । पशु बधशालाको अभावमा अमानवीय ढंगले खुला ठाउामा पशुबध गरिन्छ । बालबालिकाका अगाडि गरिने यस्ता क्रियाकलापले बालमस्तिष्कमा नकारात्मक छाप पर्नसक्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर पशुपन्छीको हकहितका लागि पनि नीति–नियम निर्माण गर्नुपर्छ तब मात्र नयाँ संविधान पूर्ण हुनेछ ।
मंसिर २५, २०७२ - पशु अधिकार
आश्विन २०, २०७२ - कोसेली प्रोडक्टका नयाँ उत्पादन बजारमा
आश्विन १०, २०७२ - घरलाई नयाँ लुक
आश्विन ३, २०७२ - आखिर देशमा आयो नयाँ संविधान